Iddoo itti dubbiin sagalee waaqayyoo labsamuuttii baga nagaan dhuftaan jennee isiin simachuu barbaadna. Sagallichis Eebba akka isiniif ta'uu hawwii keenya. kunis dubbiin waaqayyoo Eebba ta'ee waan nuu dhufeefi.
Kaayyoon tajaajila kana, waan akka ergamaa barsiisuu, mala yookaan sagantaa CEFtii miti.Irrummaa caalaa waa'ee kitaaba qulqulluuti. jechuun erga kitaaba qulqulluuti. Ergaa yeroo jennu baafataa fi artiikiloota (barruu) isaa sirritti hubbachuu fii jireenyaan mul'isuudha
Dhaloota haara kana bal'inaan dubbii waaqayyoo biraan ga'uuf duraan dursinee dubbii waaqayyoo gadfageenyaan hubachuufii beekuun barbaachiisaadha. Yeroo meeshallee keenyaatti dhima baatan waa'ee tajaajila keenyaa kana akka nuuf kadhataan hawwiin keenyaa guddaadha.
Dr. Czeslaw Bassara
Dubbii sagalee waaqayyoo labsuun' tajaajila waligalaa kitaaba qulqulluu gucaa daa'immaan wangeelan dhaqabuu waliin ta'anii barsiisuudha. Tokkummaan kunis fedha hafuura hojettootaa karaa tajaajila waligala kitaaba qulqulluu barsiisuuttin guutuudha. Kunis warra dhugaan kitaabni qulqilluun dubbii waaqayyoo ta'uu isaa fudhataniif eebba guddaadha.
Tajaajilli kun iddoo fi ta'iiwan adda addaa irratti CEF'n bakka bu'a.
Barsiisuu fi lallabuu
- Institutii CEF keessatti barsiisuun
- CEF bakka bu'uun seminaarotaa fi colleejjii kitaabaa qulqulluu keessatti barsiisuun.
- Konferansii, leensii fii tajaajila waldaa keessatti dubbachuun.
CEF bakka bu'uun
- Pastaroota fi dura bu'oota doo'achuun
- Waltajjii, konferansii fi gorsa waligala irratti CEF bakka bu'uun.
Barruu fi toraa keessa tokko tokko barreessuun. Baay'inni isaanii toora (site) keenyarratti ni argamu.